ထူးဆန်းသော ဟင်းသီး – မှို King of Mushroom | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ထူးဆန်းသော ဟင်းသီး – မှို King of Mushroom
ထူးဆန်းသော ဟင်းသီး – မှို King of Mushroom
Posted by saund on Oct 2, 2010 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness |5comments
လောကကြီးမှာ ကျွန်မ မသိသေးတာ အများကြီးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတွေ့ ဖူးတဲ့ အစားအစာတွေ အလေ့အထတွေကို သိလာရတဲ့ အခါ။ ကိုယ့်လို မသိဖူး မမြင်ဖူးသူ တွေ အတွက် ဝေမျှခံစားစေချင်လို့ဒီပို့ စ်ကို တင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက တိုက်ရိုက် ဖတ်နိုင်မယ် လို့ထင်ရတဲ့ ဒီဆိုဒ်ကို အရင် တင်ပါတယ်။
တရက်တော့ ကျွန်မ တဆိုင်ဝင် တဆိုင်ထွက် ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့ အခါမှာ အထူးဆန်း တွေ ကျွန်မ မျက်စိထဲ ၀င်လာပါတယ်။
အဲဒါက ၆လက်မအရွယ် အချင်း၁.၅လက်မ အဖြူရောင် နွားနို့ ပုလင်း ပုံစံ ပေ့ါပါးတဲ့ ဟင်းသီး ပါဘဲ။ အတော်ကြီးလို့ လုဝယ်နေသူ တွေမေးကြည့်တော့ မှိုလို့ပြောပါတယ်။ တကယ့်ကို အယ်တုံကြီး။
သူများလုဝယ်တော့ ဘာရမလဲ ကိုယ်လည်း လုဝယ်တာပေ့ါ။ ၀ယ်ပြီးမှ မေးရတယ် ဘယ်လို ချက်စားရသလဲလို့ ။
အဲဒီမှိုက အသားချည့်ဘဲ မှိုထီးလေးတောင် မပါဘူး။ ကြည့်လိုက်ရင် ပေါင်မုန့်လှီးရသလိုဘဲ။ ကြက်သွန်လို တုံးတက် ပြီး ဟင်းထဲ ထည့် ချက်ရုံဘဲ။ ကောင်းမှကောင်း။ မှိုအမည်ကို ၀ယ်သူတွေ ရောင်းသူတွေက မပြောတတ် ကြဘူးတဲ့။ ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ ဆိုတဲ့အတိုင်း လက်နဲ့မျက်စိ အနားမပေး ဘဲ ရှာလိုက်တော့ ကိုးနတ်ရှင် ထဲမှာ ပေါ်လာပါပြီ
king oyster mushroom တဲ့လေ
မှိုအသေးလေးတွေလို သန့် စရာ ဖယ်စရာမရှိဘူး။ ရေလည်း အထပ်ထပ် ဆေးစရာမလိုဘူး။ လူလည်းသက်သာ အရသာက (မှိုအသေးထက် တော့ နဲနဲ ရင့်တာပေ့ါ။) လည်း ချို နဲ့ စားလို့ ကောင်းတယ်။
http://www.google.com/images?q=king+oyster+mushroom&hl=en&client=firefox-a&hs=ZbI&rls=org.mozilla:en-US:official&prmd=iv&source=lnms&tbs=isch:1&ei=0h-oTIzQNcLCswbhgqCXDA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&ved=0CAsQ_AU&biw=1366&bih=523 အဲဒီလင့်မှာ သာ သွားကြည့်ပေတော့ ငွေနှင်းမှိုနဲ့ ဆင်တယ်
အယ်လ်အေမှာတော့ အဲဒါမျိုး(king oyster mushroom)ကို တရုတ်တန်းက စူပါမားကက်မှာ တွေ့ဖူးတယ်။ တခါဝယ်လာပြီး ကန်ဇွန်းရွက်နဲ့ချက်စားတာ စားကောင်းပါတယ်။ အယ်အေမှာ ဈေးတော့သက်သာတယ်ဗျ။
၂ခုမှ ၁ဒေါ်လာခွဲပဲပေးရတာ။ ဆန်ဂေးဘရိရယ်ဆူပါမားကက်မှာ ရှိပါတယ်။
တကယ်ဈေးကြီးတဲ့ မှိုတမျိုးကိုလည်း မိတ်ဆက်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဂျပန်လို မတ်ဆုတာကဲတဲ့..။
Matsutake (Japanese: 松茸, pine mushroom, Tricholoma matsutake = syn. T. nauseosum) is the common name forahighly sought after mycorrhizal mushroom that grows in Asia, Europe, and North America. It is prized by Japanese for its distinct spicy-aromatic odor.
လက်မလောက် တခုကို (ဂျပန်မှာဆိုရင်)၁၀ဒေါ်လာလောက်ပေးရတာ။
ဂျပန်စတိုးဆိုင်ကြီးတွေမှာ ၁၀ခုလောက်တထုတ်ကို ယန်း၁သောင်း(၁၃၀ဒေါ်လာလောက်)နဲ့ရောင်းနေတာ တွေ့ဖူးတယ်။
အဲဒါမျိုး မြန်မာပြည်မှာ ရှာတွေ့ရင်တော့ တော်တော်ကောင်းမှာ..။
တကယ်ကို ..မှိုရတဲ့မျက်နှာ ဆိုတာ ဖြစ်လာကြမှာ…
တရုတ်ပြည်မှာတာ့ အဲဒီမှိုက ဈေးပေါတယ်။ တစ်ဆယ်သားလောက်ရှိတယ့်မှိုတစ်ခုကို ၄ ရွမ် (ဗမာငွေ ၆၀၀ ကျပ်) လောက်ပဲပေးရပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ချက်လို့ရပြီး အရသာကောင်းပါတယ်။
Kai ဟုတ် အမေကြီးကားမှာဘဲ ဒီမှိုကို တွေ့ ဖူးတာ တခြားနိုင်ငံမှာတုန်းက မမြင်ဖူး ဘူး။ တခြားဈေးကြီး တဲ့ ဂျပန်မှိုတွေ ကို မျက်စိနဲ့ ဘဲ စားတယ်။ ဘတ်ဂျက်နဲ့မကိုက်ညီ မသင့်တော်လို့ရှောင်တယ်လေ